Abagibeli besitimela bashaye umshayeli waso ngamatshe eThekwini | News24
Abagibeli besitimela bashaye umshayeli waso ngamatshe eThekwini
eThekwini - Owesimame oshayela isitimela esihamba umzila ophakathi kweTheku naseStanger usathuthumela kulandela ukuhlaselwa kwakhe ngoLwesibili ekuseni ngabagibeli abebedinwe begane unwabu, kubika iThe Citizen.
Ngokusho kwakhe, abagibeli bacasuke bamphoqa ukuba ashaye irobhothi, kodwa wanqaba base bemshaya ngamatshe.
Ngokubika kwenyunyana yabasebenzi bezokuthutha kuzwelonke i-United National Transport Union (UNTU), uGugu Phakathi, 38, oseneminyaka engu-16 esebenzela inkampani yakwaPassenger Rail Agency of South Africa (Prasa) uyalelwe ukuba amise isitimela ukuze silungiswe.
Uthe esethi uyaqhubeka nohambo, wayalelwa futhi ukuba ame njengoba kukhanye ilambu elibomvu elimumisayo ukuze kudlule isitimela esithwala impahla.
Yilokhu-ke okucasule abagibeli abavele bavuka umbhejazane bamhlasela bemsabisa ngokuthi bazomubulala baphinde bashise nesitimela.
OLUNYE UDABA:Usesimeni esibucayi okhishwe isitimela sihamba
"Laba bagibeli bacasulwe wukuthi bashiywa yisikhathi njengoba bebelibangise emsebenzini ngakho-ke bebefuna ukwazi ukuthi kungani isitimela esilayisha impahla besingeke silinde bona badlule bese sona silandela ngemuva," kusho uPhakathi.
Uthi umshayeli uzamile ukubachazela abagibeli kodwa bebelokhu bemthuka abanye bezama ukungena egumbini ahlala kulo uma eshayela befuna ukumhlasela, kodwa ubezikhiyele ngaphakathi.
"Ngesikhathi bebona ukuthi abakwazi ukungena, bajikijele ngamatshe la ebengihleli khona besabisa ngokungibulala," kusho lo mshayeli.
USteve Harris, okhulumela inyunyana uthe sekwanele ukuhlukunyezwa kwabasebenzi futhi amaphoyisa kumele angenelele.
"Amaphoyisa kumele adlale indima yawo ukuqinisa ezokuphepha futhi kulawuleke namalungu omphakathi," kusho yena.